घरमा यस्ता चिजहरु राख्नाले हुन्छ पैसाको बर्षात अनि लक्ष्मीको बास ! – Online Khabar 24
घरमा यस्ता चिजहरु राख्नाले हुन्छ पैसाको बर्षात अनि लक्ष्मीको बास !
के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा सकारात्मक र नका रात्मक ऊर्जाको प्रभाव धेरै पर्छ ।
घरमा सकारात्मक र नका रात्मक ऊर्जासँग जोडिएको चिजहरुलाई वास्तुशास्त्र भनिन्छ । तर आधुनिक समयका मानिसहरु वास्तुशास्त्रमा खासै विश्वास गर्दैनन् । वास्तुशास्त्रले हाम्रो जीवनको दिशामा मोड्न सक्छ । तपाईको घरमा यस्ता चिजहरु राखेमा लक्ष्मीको बास हुन्छ ।
नरिवललाई श्रीफल मानि देवि लक्ष्मीको स्वरुप भनेर मान्ने गरिन्छ । श्रीफलहरु मध्य एकाक्षी नरिवल निकै नै शुभ हुन्छ । जुन घरमा एकाक्षी नरिवल राखिएको हुन्छ र नियमित पुजा गरिन्छ त्यहाँ संकट कहिले पनि नआउनुका साथै घन घान्यको कमी कहिल्यै हुदैन । एजेन्सी
Prevउमेर कटेर पनि जवान देखिन चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुरा कहिल्यै नखानुहोस् !
nextतीव्र गतिको कार ग’हि’रो पानीको ख’स्यो, अभिनेत्री र उनकी साथीको मृ,त्यु !